Media Archives - Xinhua News Agency
လန်ကျိုး ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကန်းစု ပြည်နယ်မှ ကိုယ်ခံပညာဆရာမတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် စွမ်းရည်များကြောင့် အံ့ဖွယ်မိန်းမသား (wonder woman) ဟု လူသိများသည်။ Zhang Hanliang (ကျန်းဟန့်လျန်) က ၎င်း၏ဗီဒီယို ဖိုင်များကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မျှဝေခြင်းဖြင့်...
စင်ကာပူ ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) မကြာခင်ကျင်းပ‌တော့မည့် ပေကျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု စင်ကာပူအားကစားအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်က ဆန္ဒမွန်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့သည်။ စင်ကာပူ အားကစားအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်စားလှယ်က ပေကျင်းဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု မကြာခင်ကျင်းပတော့မည့် အားကစားပွဲကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့်...
ပေကျင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ်ပွဲတော် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ တရုတ်ပြည်သူများ၏ အေးမြမှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုက ပူနွေးသည့် တောင်ပိုင်းဒေသများတွင်ပင် ယခင်ကထက်ပိုပြီး ပြင်းပြလာသည်။(Xinhua) ………………………. (English Version) GLOBALink | Ice-snow tourism booming in S....
ရှန်ဟိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင် ယွမ်ငွေ ၄ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၃၀.၄ ဘီလီယံခန့်) ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း ဒေသအာဏာပိုင်များက ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ...
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) စမတ်နည်းပညာသုံး ကိရိယာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းနှင့် ပိုးသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ စသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများတွင် COVID-19 ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား AI နည်းပညာဖြင့် ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ထားမှုများအား ရိုက်ကူးထားသည့် ရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ (Xinhua) ……………………………………… (English Version)...
ရှင်းကျန်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ် အားကစား၀တ်စုံ ထုတ် Erke ၏ စက်ရုံသစ်အား ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ရက် နေ့တွင် ရှင်းကျန်း တောင်ဖက်ပိုင်းတွင်ရှိသော Yutaian Tianjin စက်မှုဇုန် တွင်တရား၀င်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စက်ရုံအနေနဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း များတွင်အတူတကွလုပ်ကိုင်ရန် ပါဝင်လာသူတိုင်းကိုကြိုဆိုကြောင်းအွန်လိုင်းမှတဆင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။...
ရှန်ဟိုင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်သုတေသနပညာရှင်များအဆင့်မြှင့်တည်ဆောက်ထားသည့် ခြေထောက်ခြောက်ချောင်းပါ နှင်းလျှောစီးစက်ရုပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ Shenyang (စိန်ရန်) မြို့ရှိ နှင်းလျှောစီးကုန်းစောင်းများတွင် ပွဲထုတ်ပြသခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ Liaoning(လျောင်နင်) ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Shenyang (စိန်ရန်) က နှင်းလျှောစီးကုန်းစောင်းများပေါ်တွင် ခြေထောက်ခြောက်ချောင်းပါ နှင်းလျှောစီး စက်ရုပ်ကို...
လန်ကျိုး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ လန်ကျိုးမြို့ရှိ ဆရာဝန်များသည် အသည်းခြောက်ဝေဒနာခံစားနေရသည့် လယ်သမားတစ်ဦးအား အလွန် စိန်ခေါ်မှုများပြားသည့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစားထိုးခွဲစိတ်မှုကို အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua) ………………. (English Version) GLOBALink | Doctors complete challenging liver transplant...